Kamerona: Hetahetam-piovana, Resadresaka niaraka tamin’i Kah Walla (fandraisam-peo) · Global Voices teny Malagasy
Kamerona: Hetahetam-piovana, Resadresaka niaraka tamin'i Kah Walla (fandraisam-peo)
Voadika ny 04 Marsa 2011 4:30 GMT
Hatramin'ny fiatombohan'ny volana febroary dia mandeha ny resaka ao amin'ny aterineto fa i Kamerona dia te-hanao fihetsiketseham-panoherana tahaka ny tao Egypta ny 23 febroary 2011. Vantany heno fa voahongana ny Filoha Egyptiana, dia niparitaka haingana be ny antso hanao fihetsiketsehana.
Anisan'ireo izay namaly sy nampita ny antso Ramatoa. Kah Walla, kandidà amin'ny fifidianana ho Filoham-pirenena ho avy ao Kamerona amin'ny octobra 2011. Izy no mpanorina ny Cameroon Ô Bosso izy (Kamerona, andao handeha ), fikambanana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay manohana fifidianana malalaka sy madio ao amin'ny firenena.
Ny Filoha Kameroney Paul Biya, dia teo amin'ny fahefana nandritra ny 28 taona ary mbola hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana ho avy tamin'ity taona ity. Mamoritra amin-kery ny fihetsiketsehana ny Brigade d'Intervention Special-ny [Borigady Manokana mpiditra an-tsehatra].
Anisan'ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny renivohitra Douala i Kah Walla izay voadaroka tamin'ny 23 Febroary.
Eo ho eo amin'ny 300 eo ireo mpanao fihetsiketsehana no niseho tamin'ny voalohany, saingy nitsoaka ny ankamaroany raha nisambotra ireo polisy nefa mbola tsy nanomboka akory ny hetsika. Tamin'ny farany dia olona latsaky ny 50 sisa no tavela.
Amin'ny faran'ity lahatsary navoakan'ny mpampiasa Youtube le cameroun libre ity no ahitana mpanao fihetsiketsehana iray mijoro anoloan'ny fiara mpitifitra amin'ny rano sy manandratra ny tanany voadaroka.
Ny fandehan”ny zava-nitranga izay nahatonga ny fifanatrehana dia miseho amin'ity sarimihetsika navoakan'i Cameroon Ô Bosso tao amin'ny YouTube. Mitondra akanjo mena ny mpanao fihetsiketsehana, ary nandahatra ny olona eo amin'ny fihodinan-dalana be mpivezivezy.
Nanoratra ny zava-nitranga ny tranokala Kah Walla ary navoakan'i Mougoué Mathias, izay Kameroney mipetraka ao Milan, ao amin'ny fikambanana Facebook antsoina hoe “NY FIKAMBANANA LEHIBE INDRINDRA ETO KAMERONA AO AMIN NY FACEBOOK!!
Farany nivoaka avy any ny lehibe iray nanao fitafian'olon-tsotra. Te “hampianatra lesona ahy izy” araka ny filazany. Niteny izy ny hametrahana ahy eo amin'ny faritra manasaka ny arabe. Avy eo natodiny manontolo ho aty amiko ny kamiao mitondra tafondro-drano. Mariho ny totohondriko roa manao mariky ny fandresena miatrika ny tafondro-drano. Izany ny lesona nianarako. Ao anatintsika ny hery. Tsy misy herisetra na hadalana afaka hanala izany.
Ambonin'izany rehetra izany dia tahaka ny hoe nokendaina sy nodorana izahay noho ny fangaro simika tamin'ny rano, ary nangataka anay hiakatra ao anaty kamiao izy. Raha niakatra izahay, dia nokapohiny tamin'ny kibay ny lamosinay. Ny fihetsehampo tokana reko dia ny alahelo fa ireo nandoavako sy nandoavanao hetra no nampiseho izao fieboeboana amin'ny tsy antony sy fahambanian-toetra tafahoatra tahaka izao. Rehefa avy niakatra tao anaty kamiao dia navelany hifoka rivotra izahay ary avy eo nalefany. Inona no antony nampiakarana tao amin'ny kamiao? mba hivelezana ny lamosinay fotsiny? Mampalahelo.
Naparitaka nanerana ny faritr'i Douala ireo miaramila. Sary hita ao amin'ny Mboa Blog [fr] vavahadin-tserasera Kameroney.
Resadresaka natao tamin'i Kah Walla
Ao anatin'ny resadresaka, dia nizara ny heviny momba ny toe-draharaha politika sy sosialy eto Kamerona i Kah Walla, ary ny ahazoana manao revolisiona “mitovy ny tao Egypta” . Nanambara izy fa ny fihetsiketsehana izay natomboka ny 23 febroary dia fanombohan'ny zotra politika izay mankany amin'ny tena lalany:
Na dia mihevitra aza izy fa niditra “zotra” vaovao ny Kameroney, tsy nieritreritra ilay vehivavy mpanao politika fa tonga ny fotoanan'ny revolisiona “mitovy ny tao Egypta” . Ny tena tadiavin'ny fikambanany aseho tamin'ny alalan'iny fihetsika iny dia hoe ny vahoaka dia tokony hanao fihetsiketsehana ary mahavita izany na dia eo aza ny “hamaroan'ny herim-pamoretana”:
Nitatitra ny tranokalan'ny Africanews fa nisy mpanao politika hafa voasambotra, tahaka ny mpikambana Parlemantera Jean Michel Nintcheu, solombavabahoakan'i Douala.
Nanome fanazavana fanampiny i Kah Walla fa izy sy ny fikambanany dia tsy niantso an'i Paul Biya, Filohan'ny Kamerona nanomboka ny taona 1982, hametra-pialàna; fa mikasa kosa ny hampandroso ny “fanovana ny rafitra” ao amin'ny firenena:
Araky ny hevitry ny kandidà hirotsaka hofidiana filoham-pirenena,na dia teo aza ny herisetra niaretana, na dia teo aza ny fisamborana, maro ireo Kamerona resy lahatra ny hamarana io rafitra io: